အရွယ်ရောက်လိင်အထီး၏ဇာတ်လမ်းများအတွက်ညစ်ညမ်းနှင့် Autogynephilia - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
ငါမကြာသေးမီက '' trans ကလေးတွေ '' ၏ဇာတ်လမ်းများအတွက်တူညီမှုကိုကြည့်အပိုင်းအစထုတ်ဝေကလေးများအနေဖြင့်ကူးပြောင်းခြင်းမပြုခဲ့သောအချို့သောလိင်ခြားသူများ၏ဇာတ်လမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတူညီသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်ဆိုလျှင်အဘယ်အရာကိုတည်ထောင်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မည်ဟု၎င်းကပြောသည်။
အဲဒီမှာယခုငါသည်ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏အသီးအသီးသည်အဘယ်သူ၏ရင်ခုန်စရာ / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်တစ်ဦးတယောက်ထံမှများမှာကြောင်း '' လိင်တူဆက်ဆံသူတယောက်ပါ 'အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ယုံကြည်ဘယ်သူမျှမတော်မူသောသားအဖြစ်ပြောင်းလဲမပေးခဲ့ပါဘူးသူကိုလေးအထီးတယောက်၏ဇာတ်လမ်းများထဲကနေကဏ္ဍများကိုလိုက်နာခြင်းသို့မဟုတ် ရိုးရိုးသို့မဟုတ်လိင်ကွဲဖြစ်စေ, ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအဇာတ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့လေးဆယ်အတွင်းအသွင်ပြောင်း, သူတို့၏ကျား reassignment ခွဲစိတ်ကုသ (penile တစ်ရှူးအပေါ်တစ်ဦးခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်တစ်ဦး neovagina ၏ဖန်ဆင်းခြင်း) အသေးစိတ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်အပိုင်းအစရေးသားခဲ့သည်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်လာပါတယ်။
ငါကဆင်းရောက်ရှိရန်နှင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ညာခံစားရဖို့ခံစားရမယ်လို့ပုံကိုစိတ်ကူးယဉ်, (ငါ့အမလိင်အင်္ဂါ) အကြောင်းကိုအိပ်မက်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်။ ငါ မှစ. ငါ့အဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနေလိင်အင်္ဂါရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလက်ကိုငါ့ knickers သို့လျှောပြီးစိုထိုင်းသောအလျားလိုက်အပေါက်ရှာတွေ့မယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာအတွက်တွန်းအားပေးငါ့ကိုအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပါစေလိမ့်မယ်, ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန် - တစ်ဦးကိုလက်ညှိုးနှင့်ထို့နောက်ယုတွန်းလိမ့်မယ်။ ကျွန်မခွဲစိတ်မီညသည်အထိကြောင်းအိပ်မက်အိပ်မက်ပေါ်မှာထမ်း။ ငါ့အမလိင်အင်္ဂါမဆို Natal အမျိုးသမီးကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်မယ်လို့တူညီရေးနုံအိပ်မက်။ အကြှနျုပျ၏ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကသူငါ့ကိုအင်္ဂါဇာတ်အဖွင့်, တစ်ဦး Sensation အစေ့များနှင့်နှုတ်ခမ်းနှင့်, လက်တွေ့ကြည့်ရှုစေမယ်လို့ပြောတယ်, အတွင်းစိတ်နှင့်ပြင်။ ငါကအနည်းဆုံးသုံးလလောက်လိင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းကြားပြောလေ၏။ ငါနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-ဝိညာဏ်၏ထွက်ကျဆင်းအဖြစ်4နေ့ရက်ကာလအဘို့ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ကျွန်မလိင်အိပ်မက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါသာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ရိုးရိုးအနာကပ်ပပယ်ရောက်တစ်ချိန်ကငါ့အမလိင်အင်္ဂါနဲ့တူကိုကြည့်မယ်လို့အဘယ်အရာကိုအံ့ဩကြ၏။ ပြည်သူ့ဓာတ်ပုံတွေ post ပေမယ့်သူတို့က '' လိပ်ပြာ '' သူမြားကိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ "ငါ့ကိုကြည့်ပါသူတို့" သူတို့ "ငါသည်အဆင်းလှသော pussy ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့မိပါတယ်။ " ဟုပြော (Roche 2016)
ကလေးငယ်များအနေဖြင့်ကျပုံစံဣတ္အပြုအမူတွေနဲ့ဦးစားပေး၏ဖော်ပြချက်များအရပျတှငျကြှနျုပျတို့အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါရှိခြင်း၏စာရေးဆရာရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်ဖော်ပြ, ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကူးယဉ်၏စာမျက်နှာရှိသည်, ထိုလူငယ်၏ဤ feminised ဗားရှင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦး၏အပြန်အလှန်များ၏ဖော်ပြချက် အထီးသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားလိင်အင်္ဂါတစ်ဦး "စိုစွတ်သောအလျားလိုက်အပေါက်" အဖြစ်ဖော်ပြထားနှင့်အတူပြီးသွားအတူညစ်ညမ်းမှထင်ရသောအသိအမှတ်ပြုထားသည့်, အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် "ငါသည်ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့လှပတဲ့ pussy ပေါ့။ "
ငါနိုင်လွန်များအတွက်အထူးသဖြင့် predilection အတူ Cross-တစ်သင်းလုံးကကစားသမား fetishism တစ်သမိုင်းများကိုပြု၏။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျနော်အမျိုးသမီးအဝတ်အစားဝတ်ဆင်နှင့်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုနှိုးဆော်ခြင်း ... highschool နှင့်ကောလိပ်၌ငါ trans ဆိုတဲ့မိန်းမနှင့်ညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှိသမျှတို့ကိုငါပြန်ပြီးတော့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ရှိခြင်းခံခဲ့ရပါက trans ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးမြားအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ခဲ့မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမျိုးသမီးကျားမအခန်းကဏ္ဍအတွက်လိင်အင်္ဂါလူနေမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ... ငါနောက်ဆုံးမှာငါဒါ trans ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးညစ်ညမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းသဘောပေါက်လာ ငါစောင့်ကြည့်အဖြစ် trans ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးမြား၏အလောင်းများကိုသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတို့နှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့။ ငါ non-op trans ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အလောင်းလိုခငျြသောအခြိနျကာလကိုကျော်သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသဗေဒကြိုက်တယ်။ ကိုယ်အဘို့ငါကြောင်းချင်တယ်။ ငါကိုချစ်သောအရာကိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ (ဝီလျံ 2016)
ဝဘ်မှအခြားအပိုင်းအစရေးသားသူသူတို့ Transgender များဖြစ်ကြသည်နိဂုံးရောက်ရှိဘယ်လိုဆြေးြေိံး:
တက်ကြီးထွားလာငါ့ကိုသိသူမည်သူမဆိုငါမိန်းမနှင့်စိတ်ဝင်စားတယ်သိတယ်။ ငါ Playboy တစ်-ရှိရမည်မဂ္ဂဇင်းခဲ့ကြောင်းစဉ်းစားရန်ငါ၏အဆွေ၏ပထမဦးဆုံးရှိ၏ ငါတောင်ငါ့ 10th မွေးနေ့များအတွက်မိတ္တူကိုဝယ်ခြင်းငှါငါ့အ mom, တောင်းစားမှတ်မိ! ငါသည်လည်းလျှို့ဝှက်စွာတလျှောက်သို့ရောက်လာသော Vogue, နာမည်ကျော်များနှင့်မည်သည့်အမျိုးသမီး၏စျေးဝယ်ကတ်တလောက်ကဲ့သို့အမဂ္ဂဇင်းများကိုဖတ်ရှုချင်တယ်။ ဆိသကဲ့သို့ငါအရာသည်ဤမျိုးအကြောင်းကိုအတော်လေးအရှက်မရှိသောခဲ့ပေမယ့်အမျိုးသမီးများကိုကြည့်နဲ့ငါ့စွဲငါအသက်ကြီးတယ်သကဲ့သို့ငါ့ကိုရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရစေတော်မူ၏။
အဘယ်ကြောင့်? ငါ၏အအကျိုးစီးပွားပဲခေါ်ဆောင်သွားမဟုတ်ခဲ့လို့ပဲ။ အဘယ်သို့ငါမကြာသေးမီကသည်အထိရှင်းပြနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့လှပတဲ့မိန်းမအားဆွဲဆောင်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်အမှန်တကယ်တဦးတည်းဖြစ်လိုသောအကြားငါ့ဦးခေါင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကျွန်မဤနည်းခံစားခဲ့ရ, ဒါမှမဟုတ်အားလုံးယောက်ျားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမကအကြောင်းပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြောင်းတည်းသောကောင်လေးခဲ့လျှင်အံ့သြဒါနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုကဲ့သို့, ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာကိုလည်းရောင်စဉ်ကြောင်းထွက်လှည့်။ (Egan 2016)
အင်တာနက်ကိုအထူးသဖြင့်လိင်လူများ, လိင်၏ Self-အသိအပါဝင်သောညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှု, ဆက်သွယ်ထားသောဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူထူပြောနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Reddit "Porn အကြောင်းမေးခွန်း" ပေါ်တွင်တစ်ဦးချည်အတွက်အောက်ပါမေးခွန်းကိုမေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုပွားနေကြသည်။ (Reddit.com 2016)
မေး: သူတို့ trans ဆိုတဲ့ခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်မတိုင်မီဘယ်သူ့ကိုမှလိင် porn မှ masturbate ခဲ့သလား ပိုပြီးတိတိကျကျဖြစ်ဖို့, ရုပ်ပုံများ captioned ။ Edit ကို / update ကို: အမေဇုံအပေါ်မိန်းကလေးတစ်ြိမ်အမိန့်ထုတ်
A1: ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ TF / TG ​​အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများနှင့် RP များတွင်အဓိကထားလုပ်ကိုင်သော TFGamesSite.com စာမျက်နှာကိုလည်းကျွန်ုပ်လက်ခံကျင်းပပေးသည်။
A2: ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးသို့ပါပြီဟန်တစ်ဘုံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ checkout ဂျူလီယာ Serano ရဲ့စာအုပ်နှင်တံမိန်းကလေး။ သူမသည်အလွန်တိုတောင်းသောအကြာတွင်အခန်းကြီးတတိုတိုတုတ်တုတ်ကအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
A3: ဟုတ်ပါတယ်, ငါတကယ်ကအကြောင်းဖိနှိပ်ခံခဲ့ရလျှင်ပင်။ ငါ trans ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ trans ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေနှစ်ဦးစလုံး၏ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး ... ငါပင်ငါဖြစ်နိုင်သည် trans ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။ ငါသည်တကယ့်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာနက်ရှိုင်းငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ကိုကဲ့သို့တူညီသော "configuration" ကိုအတူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှပြန်ပြောပြရတာလွယ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာငါနေဆဲကကြိုက်တတ်တဲ့ကျွန်မမှန်းဆ။
A4: ဒါသည် T-porn ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ 100% အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများကဲ့သို့? ... မည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်လာမယ့်ခြေလှမ်းကို ယူ. တစ်ဦး TS အစောင့်အကြပ်နှင့်အတူကအမှန်တကယ်လုပ်လဲ ရုံစပ်စု ... ဈ lols, ဖက်ပြောင်းတက်အဆုံးသတ်ကြစေခြင်းငှါ, မည်မျှငါ၏အဟောင်းတဦးဖောက်သည်တွေးမိဖို့စတင်တာ!
A5: Yup, နောက်ဆုံးမှာသီးသန့်ပြုလုပ်ကြည့်၏အမှတ်ရတယ်။ ယခုငါထပြန်မွှေ; ဒါပေမယ့်ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်အချည်းနှီးနှင့်ငါ့ကိုယ်အားဖြင့်နှိုးဆွတယ်, ဒါကြောင့်ငါအခြိနျမှနျမှငါ့ကိုယ်ပိုင်အကူးအပြောင်း fetishsize ။ ကြောင်းကျန်းမာင်သို့မဟုတ်မပါလျှင်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူး။
A6: ဟုတ်ပါတယ်, အများကြီး ... ငါလည်းတကယ် futa hentai လိုပဲ။ ဖြတ်ကျော် porn က reddit အပေါ်ဤနေရာတွင်လိင်တူချစ်သူဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အပျော်တမ်းရှိမရှိ, ငါအ masturbate တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါတည်ထောင်အပေါ်ဆမ် Riedel နေဖြင့်တစ်ဦးကအပိုင်းအစ (Riedel 2017) ညစ်ညမ်းဤအမျိုးအစားရေးသားသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာများဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ရှိခဲ့ပါတယ် '' futa '' မှာလူသိများသည့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပေးပါသည်:
... futanari, လေ့ဖို့ကိုတိုစေ "futa" penises နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေသရုပ်ဆောင်ကြောင်းဂျပန်ကာတွန်းညစ်ညမ်းတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကအခြို့သောမဝှေး, ရှိသည် ဖြစ်. , အချို့အချို့သောမယောနိ, ရှိသည်။ အင်တာနက်ကိုမှောက်လှန်ရှိလျှင်, စားသုံးသူလိင်တူချစ်သူဖြစ်စေလျက်, futa အဘယ်သို့အမျိုးအစားများကိုနှစျကျြောစောဒကတက်ခဲ့ကြပေမယ့် 13 မှာငါတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ codifying မစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခြိနျမှာကြှနျတေျာ့အတွေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အတိုင်းအတာတစ် dickgirl ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကောင်းစဉ်အမြဲငါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံးအရာကြီးသောငါ၏ရုတ်တရက်အသိပညာဖြစ်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအပိုင်းများကဲ့သို့ Riedel ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိမှတ်တမ်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသောသူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ အ ၀ တ်အစားအ ၀ တ်အစားများနှင့်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရှိထားသည့်အစာရှောင်ခြင်းများအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် -
လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ကျော်, ငါသည်ကိုယ်နှင့်ငါ၏လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလမ်းကိုသိသိသာသာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါချစ်ရာသခင် futa ၏သိပ္ပံဝတ္ထုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်များမှပြန်လာမယ့်လူထုကိုဗီဒီယိုအမျိုးအစားများစွာအတွက် hentai ပုံပြင်များရာပေါင်းများစွာ, ဖြစ်ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်အတွက်ပုံရသည်အဘယ်အရာကိုဖတ်ပါ။ ငါ့ကိုဝမ်းသာပီတိတစ်ခု trope ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုဒီ fetish ခဲ့ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အဘို့အလုံလောက်အောင်လက်တွေ့ခဲ့ - ငါခငျြးခငျြးအရာအတွက်ရူးသွပ်သိပ္ပံပညာရှင်မိတ္တူလူတစ်ဦးကနေခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို Kawaraya ATA ရဲ့ Kopipe အတွက်လုံး-မျဉ်းစောင်း-ခွဲ Yukito ၏ misadventures, ဝမ်းသာပီတိ ပဲကျွန်မကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းမပျော်ခဲ့တာမဟုတ်တစ်ခုအရိပ်အယောင်, ထို။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါသည်လည်းဒီပစ္စည်းပစ္စယများကဖွင့်တယ်သူကအင်တာနက်ပေါ်တွင်လူရာပေါင်းများစွာကဝိုင်းမဟုတ်လော ထိုသို့ညာဘက်, ထိုတူသောဘာမှအစဉ်အဆက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွစျနိုငျမကြိုက်ဘူးလား
သို့သော်ထိုသို့သာဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်အဝန်ခံခဲ့မတိုင်မီယူ: ငါမနာလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Hinemosu Notary ရဲ့ကြေးမုံပုံရိပ်၏သူရဲကောင်းဒါကြောင့်ခက်ခဲသူတစ်ဦး futa ဖြစ်လာခဲ့သည် crossdressed, ငါအနုပညာရှင် InCase ၏ slutty ရှက်-ပေမယ်-futa နှင့် femboys အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအများကြီးကိုသိမြင်လျှင်ငါအနိုင်နိုင်ငါ၏အငြူစူခြင်းဆံ့နိုငျတယျ။ သို့တိုင်, ငါ trans ဆိုတဲ့မဟုတ်ခဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့စီမံ; ကိုယ့်သူ့ကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်လိင်တွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုမယ့်အနာဂတ် VR ဂိမ်းကစားသူစိတ်တိုင်းကျမိန်းကလေးထဲမှာဇာတ်ကောင်လိုပဲမိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်ရန်ချင်တယ်! ယောက်ျားလေးများထက်ထက်သန်သန်နဲ့အဆက်မပြတ်အလိုရှိကြသည်တွင်ရန်အဘို့အကြောင်းညာဘက်ပုံမှန်လား
ငါဒီလမ်းခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ဘူးကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်လာတယ်။ သူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသို့ "ထောင်ချောက်" ဖြောင့်ယောက်ျားဖို့လုံလောက်တဲ့ girlish နေသောယောက်ျားလေးများနှင့် ပတ်သက်. - ငါပြောပြီင့်တော်မူသောနဲ့ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အတော်များများက trans ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးမြား futa နှင့် "ထောင်ချောက်" ရုပ်ပြအကြောင်းကိုအလားတူခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သုံးဆယ်ဟယ်လင်, သူမ၏ Tumblr သည်ပေါ်သောမိနျးမပို့စ်များကို futanari ရုပ်ပြတစ်ဦးဖန်တီးသူသူ့ကိုယ်သူသူ trans ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး, "ဖက်ပြောင်းမတိုင်မီ futa ပစ္စည်းစားသုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးထိန်းသိမ်းနေစဉ်ဗီရိုထဲမှာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ထွက်ခွာသွားတဲ့ပျက်ပြယ်ဖြည့်ကူညီပေးခဲ့သကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောတယ် transness ။ "
အကူးအပြောင်းငါ့အဘို့မလွှဲမရှောင်ခဲ့ ... ငါ Katou ဇွန်နဲ့သာဤမျှလောက်ငါကငြင်းပယ်ဖို့လုပ်နိုင်ရှိခဲ့သည် !, Transform ကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအစစ်အမှန်အသက်တာ၌အထီးမှာအားလုံးဟန်ဆောင်စွန့်ခွာနေစဉ်စိတ်တိုင်းကျမိန်းကလေးဆင်တူ, Katou ရဲ့ဇာတ်လမ်းအတွက်သူရဲကောင်းတစ်ဦး VR ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ futanari ခန္ဓာကိုယ်စူးစမ်း။ ပိုကျွန်မသူ VR အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိမိထက် ပို. သဘာဝအလျောက်ခံစားရသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်အခန်းကြီးဖတ်နည်းငါကငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်း: ငါငျြတယျ။ ငါချစ်စရာ girlish ပင်လှပသောဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါဟာ 2015 ၏နွေရာသီသည်အထိယူ - 10 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုကျွန်မပထမဦးဆုံးအစောင်း Mode ကိုဖတျရှုပြီးနောက် - ဟော်မုန်းကုထုံးကိုစတင်ငါ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှထွက်လာမယ့်ကိုစတင်များနှင့်လများကပိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက ပြု. , ရလဒ်အစဉ်အမြဲငါစိတ်ကူးနိုင်ထက်ပိုမိုပြည့်စုံကြပြီ။
ဤအရာသည်အလွန်အပိုင်းအစခွဲခြားစိတ်ဖြာမီဒီယာ-သွေးဆောင် Transgender များဖော်ထုတ်ခြင်း '' ဖြစ်ပါသည်ပုလ်, အယ်နှင့်ကျား Dysphoria'' anime နှင့်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာအပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတ်ထဲသို့ဝင်ရသော။
ဤဇာတ်လမ်းများသည် 'trans kids' 'ဇာတ်ကြောင်းနှင့်အနည်းငယ်သာတူညီသော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီမှုကိုမျှဝေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခံရသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ကျမ်းပိုဒ်အတွင်း ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အကူးအပြောင်းအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ယူဆခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ခန္ဓာဗေဒ၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဆန်သောbehaviorတ္ထိဆိုင်ရာရှုထောင့်များရှိခြင်းအားဖြင့်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုချင်းစီနှင့်လိင်ခြားယောက်ျား၏စိတ်ကူးယဉ်အခြေပြုအမြင်အာရုံတွင်ခိုင်မာတောင့်တင်းသောလက္ခဏာများရှိသည်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်အပြုအမူများကို autogynephilia ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ 'အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း' အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ငါပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကဒီအပေါ် (Roche နှင့် Egan အပိုင်းပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်) ဒီရန်အလွန်အကျဉ်းလမ်းညွှန်ရေးသားခဲ့သည် "အဘယ်အရာကို Autogynephilia ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုမျှမက, အကျဉ်းမှတ်စု“ Autogynephilia ကို 'erotic target location error' အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပြီး၊ erotic target သည်အပြင်ဘက်မဟုတ်ပါ (အတွင်းဘက်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်) (အတွင်းလိင် (လိင်တူချင်းချစ်သူများ၏စိတ်ကူးသည်အမျိုးသမီး)) ဖြစ်ပြီး ၄ င်းကိုလုံးဝ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အခြားအမျိုးအစားများ (အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) နှင့်ပေါင်းစပ်သည်
Transvestic autogynephilia: ပုံမှန်အားဖြင့်ဣတ္အဝတ်အစားဝတ်ထား၏လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ arousal (ဒီသူတို့ autogynephilia အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါလူတွေကမကြာခဏအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကအများကြီးပိုမိုပျော့ဖြစ်ပါတယ်);
အမူအကျင့် autogynephilia: ဣတ္အဖြစ်မှတ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ arousal ကိုလည်း '' လူ့ autogynephilia '' ဖုံးလွှမ်း;
ဇီဝကမ္မ autogynephilia: အမျိုးသမီးအဖြစ်မှတ်လူတွေကိုတိကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ arousal (ကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်သယောင်ဟန်ဆောင်နေကန်ရတဲ့ယောက်ျား၏အင်တာနက်ပေါ်ရှိအချို့လမ်းထွက်ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်); နှင့်
ခန္ဓာဗေဒ autogynephilia: တစ်စံတန်ဖိုးအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိခြင်း၏စိတ်ကူးမှ arousal, ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်း၏အစိတျအပိုငျး (ရင်သားတစ်ဦးဘုံစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ကြသည်မကြာခဏ autogynephile ရင်သားချင်ကြလိမ့်မည်သို့ရာတွင်သူ၏လိင်တံနှင့်ဝှေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ဒီ 'တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း autogynephilia' 'တစ်ဦးဥပမာပြောရရင်ဖြစ်ပါတယ်) ။
Autogynephilia ဟာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ်အယူအဆအဖြစ်ယူဆခံရနိုင်တယ်၊ autogynephilic အထီး၏ဝိသေသလက္ခဏာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်အသွင်ပြောင်းမှုဆီသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။ လောရင့်စ်၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ကျွန်ုပ်ဤအပိုင်းအစတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သောလေးခုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟုထင်ရသည်။
ငါ့ပညာအတတ်စေရန်, တယောက် autogynephilic မှညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ရန်မတရားဝင်ပညာသင်နှစ်အလုပ်ရှိခဲ့သည်, ဒီကအတည်ပြုခဲ့သည် ဒေါက်တာ Ray Blanchard ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကစကားပြောဆိုမှု၌တည်၏။ trans trans ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအကျိုးရှိသောပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ autogynephilia နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည် autogynephilia နှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအကျိုးရှိသောပြောဆိုမှုများပြုလုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးများနှင့်၎င်းသည်လူငယ်ယောက်ျားလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးငယ်များအကူးအပြောင်းကိုထောက်ခံအားပေးနေသောအထီးကျန်လိင်ခြားသူများ၏တွန်းအားများကိုအမှန်ပင်သံသယဖြစ်စရာလည်းမေးခွန်းထုတ်သင့်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိန်းကလေးများသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုထောက်ခံသောလူငယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူဘုံဇာတ်ကြောင်းကိုမျှဝေခြင်းမရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးငယ်များကိုယောက်ျားလေးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုစဉ်းစားသောအခါဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူများ၏စကားလုံးသည်လုံး ၀ ယုံကြည်စိတ်ချမှုလုံးဝမရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြုလိုသည်။
Egan, N. 2016 ။ "17 လက္ခဏာတွေငါလိင်ဒါပေမယ့်ဒါဟာမသိခဲ့။ " ဖြတ်ကျော်ကဖေး။ 27 ဇွန်လ။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2017
လောရင့်စ်၊ အေ။ ၂၀၀၇“ ငါတို့ချစ်သောအရာကိုဖြစ်လာခြင်း - လိင်တူချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အချစ်၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီဝဗေဒနှင့်ဆေးပညာအတွက်ရှုထောင့်, အသံအတိုးအကျယ် 50 အရေအတွက်4(ဆောင်းဦး 2007): 506-20
Reddit.com ။ 2016 ။ / r / asktransgender ။ 24 မတ်လ။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2017
Riedel, အက်စ် 2017 "ဂျပန်ကာတွန်း Porn ငါ့ကိုငါ့အ Trans အထောက်အထားနားလည်ကူညီပေးခဲ့" တည်ထောင်။2ဇန်နဝါရီလ။ Access 15 မေလ 2017
Roche, ဂျေ 2016 ။ "အခြားမြေ။ " အဆိုပါ Queerness ။ 1 သြဂုတ်လ။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2017
ဝီလျံ, R. 2016 ။ "Autogynephilia - တစ်ဦးက Critique သည်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Narrative ။ " ဒဿန Percolations ။ 8 ဖေဖော်ဝါရီလ။ ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2017